Yekufungidzira 2 ye iPhone ne iPad inogashira zvakapfuma zviyeuchidzo uye zvitambi zveMessage | IPhone nhau
Yekufungidzira 2 yave pachayo payakakodzera imwe yeakanakisa mashandisiro atinogona kuwana muApp Store kutarisira karenda yedu, pamwe neKarenda 5. Kana iwe uri mushandi anoshanda wekendendende, zvingangoita kuti kanopfuura kamwe chiitiko iwe waona kuti Iyo yekuzvarwa iOS application inotadza kuita sarudzo, yakanaka kwazvo kunyorera iyo yakavandudza zvakanyanya mumakore achangopfuura, asi izvo zvinogona kuve nani. Yekufungidzira 2 ichangobva kugamuchira nyowani nyowani mune yayo vhezheni ye iPhone uye mune yayo vhezheni ye iPad, dzinotengeswa zvakasiyana nemitengo yakasiyana, iyo yekupedzisira iyo inotipa tsigiro yezviwanikwa zvakawedzerwa mukuwedzera kwekutipa isu pakiti yezvinamirwa zveMessage application.
Fantastical 2 inoenderana neApple Watch, saka tichagara tiine paruoko rwedu zvese zvakasarudzika pakarenda yedu, nguva dzatinogona kunonoka, kugadzirisa kana kudzosera kumashure pasina dambudziko. Kana iwe uchine kusava nechokwadi pamusoro pehunhu hwakapihwa neichi chishandiso, iwe unofanirwa kuziva kuti avhareji mamakisi eFantatical 2 muApp Store ndeye 4,5 nyeredzi kubva pa5, zvichibva pakuongorora kwe265, chimwe chinhu chakanyanya kunetseka kuwana nevakawanda maonero.
Chii chitsva muFantastical 2.8 vhezheni 2
Nekuda kwemabasa anongowanikwa muIOS 10, iko kunyorera kunoda yazvino vhezheni yeIOSI kuti umise uye ushande pamidziyo.
Kutenda kune zvimisikidzo zvitsva zvekushandisa, isu tichakwanisa kuzviratidza neimwe nzira.
Izvo zvitsva zvakafumiswa Notices zvinotibvumidza isu kuti tikurumidze kuona zvimwe zvakawanda nezve zviyeuchidzo uye zviitiko.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweDynamic Type (iPad chete)
Nyowani haptic mhinduro pane iPhone 7 uye iPhone 7 Plus.
Kuvimbika uye kugadzikana kwekushandisa kweApple Watch kwave kuri nani.
Iko kushandiswa kwenzvimbo kwave kuchinjwa, kuchishandiswa chete kana isu toshandisa chishandiso, panzvimbo pekugara.
Yakagadziriswa bhagi iyo yakatibvumidza isu kushandisa yechitatu-bato makiyi. +
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Inofungidzira 2 ye iPhone nePadad inogamuchira zviyeuchidzo zvakapfuma uye zvitambi zveMessage
Roofbot: Puzzler Pane Iyo Roof, yemahara kwenguva shoma